Ny hosoka malaza indrindra amin'ny Internet 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia, ny zavatra ilaintsika koa dia mifantoka kokoa amin'ny fampiasana ny haitao mihitsy, manomboka amin'ny tamba-jotra sosialy ka hatrany amin'ny tambajotra, hatramin'ny fividianana zavatra an-tserasera tsotra indrindra amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy ilana azy, noho izany, ny manamarika fa na ny mpisoloky aza dia tonga lafatra ny teknikan'izy ireo hampidirina am-pelatanan'ireo mpampiasa mahantra. Raha ny marina, ny hosoka amin'ny Internet dia manararaotra ny fiaraha-miory, tahotra ary fitiavam-bola avy amin'ny mpampiasa an'i Internet.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fisolokiana be mpampiasa sy be mpampiasa indrindra eran-tany.
VAKIO IZAO: Ahoana ny fomba hisorohana ny scam sy spam
1. Fampanantenana mihoampampana:
voasambotra amin'ny alàlan'ny andianteny mahomby toy ny "ny asa tonga lafatra dia tsindry iray monja. Manampy anao izahay hahazo an'io"O"Miasà ao an-trano ary mahazoa folo heny!".
Iray amin'ireo malaza indrindra, ankehitriny Facebook nandritra ny taona vitsivitsy, dia ny scam amin'ny Fanararaotana Ray Feno sary miaraka amin'ny vidiny mirary: tsy misy dikany ity fanaovana hosoka ity ary mbola miteraka olona marobe izay, voasarika amin'ny vidin'ny 19,99 euro, dia mirona amin'ny fikitihana ilay sary. Amin'ireny fotoana ireny dia resy lahatra ny olona iharan'izany fa amin'ny alàlan'ny fanolorana vola amam-bola na ny mari-pananany any amin'ny banky dia afaka mahazo ilay asa tonga lafatra izy ireo na vokatra amin'ny vidiny mihena izay, mazava ho azy, tsy ho tonga mihitsy.
2. Serivisy fanangonana trosa:
Amin'ity tranga ity dia mieritreritra ilay niharam-boina fa amin'ny fandoavana vola mitentina mitovy amin'ny isan-jaton'ny trosa dia vondron'olona iray no hikarakara manokana ny trosa rehetra. Tsy misy mety ho diso kokoa, satria tsy hahita ny fahafaham-pony velively ny traboina, fa, ny mifanohitra amin'izay, hahita olana bebe kokoa izy.
3. Miasa an-trano:
Tsy manafina fisolokiana foana ireo tamba-jotra, saingy tsy fahita amin'ny olona manolotra asa any an-trano ny manao ny marina toa azy ireo.
4. "Andramo maimaim-poana":
... ary afaka fa tsy. Ny mekanisma dia mametraka fa mampanantena ireo mpisoloky fa hampiasa serivisy na mandritra ny fotoana fohy, tsy andoavam-bola tanteraka, avy eo ny olana dia ny tsy fahafahan'ny foto-kevitra hisoratra anarana amin'ilay rafitra nisoratany anarana, noterena handoa zavatra iray. ka tsy misy zanabola izany.
5. "Mila indram-bola ve ianao?":
Ity no fisolokiana mahazatra indrindra izay ananan'ny olona maro, efa imbetsaka efa trosa, no lavo tsy hay lazaina intsony. Raha ny marina, ilay teny "indram-bola" dia ampiasaina amin'ny fomba tsy marina ho mitovy dika mitovy amin'ny "zana-bola"Raha ny tena izy dia matetika mitranga fa ireo ao ambadiky ny tolotra ireo dia mangataka vola hanokafana fanao ary avy eo manjavona amin'ny rivotra manify. Raha ilaina ny indram-bola sy mamatsy vola dia asaina mifandray hatrany amin'ireo andrim-panjakan'ny banky fanta-daza.
6. Halatra famantarana:
Mampalahelo fa tsotra be ny mampiditra scam ary tena mihanaka amin'ny vanim-potoanan'ny tambajotra sosialy. Ny fahamoran'ny fakana ny mombamomba ny hafa dia efa voaorina, fa ny zavatra ratsy indrindra dia amin'ny ankamaroan'ny tranga dia taraiky loatra ny mahatsapa azy ilay niharam-boina. Amin'io lafiny io dia mirongatra ireo hosoka trosa namboarina, raha ny marina halatra- Ny fisolokiana dia mitaky fangalarana angona manokana sy ara-bola ary avy eo hampiasana izany hampiharana indram-bola na hividy entana an-tserasera; manimba ny traboina izay mety hahalala ny fisolokiana raha tsy, ohatra, manandrana mangataka indram-bola izy ireo nefa nolavina noho izy ireo tsy nandoa ny saram-pandraharahana ataon'ireo mpisoloky. Noho izany dia ilaina ny mitatitra ny zava-misy amin'ny manampahefana ary miroso amin'ny fangatahana handà ny hetsika.
7. "Nandresy 10.000 € ianao!" na "FREE iPhone 10 ho anao fotsiny raha tsindrio eto!":
Iza no mbola tsy nahita pop-up mitovy amin'izany raha mizaha tranonkala? Tokony hotadidinao fa aza tsindriana ireo tolotra ireo, satria amin'ny tranga mety indrindra dia voan'ny virus ianao raha ny ratsy indrindra, mety hisy olona mitsikilo ny solosainao lavitra, mangalatra ny fampahalalana rehetra ilaina hidirana, ohatra, mba ny kaontinao any amin'ny banky. .
VAKIO IZAO: Inona no hatao raha miteny ny Internet hoe "Arahabaina, nandresy ianao"; ny fomba hisorohana na hanakanana azy
8. Antsoy ny 800 ***** ary fantaro hoe iza ny olona miafina aminao ":
... ary azo antoka fa tsy mpankafy; Rehefa miantso ireo isa ireo, raha ny marina, ny saram-pifandraisana fotsiny dia mety handany vola be ary ny serivisy tsy ampoizina dia mety handoa vola tsy mitovy ihany koa.
9. Varotra amin'ny Internet:
amin'ity tranga ity dia tsara foana ny matoky tranokala ofisialy ed alalana mividy sy mivarotra amin'ny Internet. Raha ny tena izy, ny marika fanta-daza kokoa sy ekena dia ny mora kokoa amin'ny tranokala mangalatra ny sary famantarana sy ny mombamomba ilay marika, ary avy eo manatitra vokatra diso amin'ireo izay mampalahelo izay miasa na ny vokatra novidiana aza. tsy natolotra an'izay nandray mihitsy. Rehefa miditra dia mety manana ny endrik'ilay tany am-boalohany ny tranokala, fa ny zava-misy fa maro ny entam-barotra 50% tsy maintsy miantso fanairana ho an'ny fisolokiana mety hitranga.
VAKIO IZAO: Fomba fividianana amin'ny eBay hialana amin'ny scam
10. Fisolokiana amin'ny adiresy mailaka amin'ny orinasa sy ny CEO:
dia sasany amin'ireo karazana fisolokiana vaovao izay misy akony manokana amin'ny orinasa, izay iarahan'ny mpanao heloka bevava miditra amin'ny fifandraisany ara-barotra amin'ireo orinasa hafa, na an'ny mpitantana an'io orinasa io ihany, miaraka amina hafatra diso nefa heverin'ireo niharam-boina , alefaso ny vola be hanamarinana kaonty amin'ny anaran'ny mpisoloky.
VAKIO IZAO: Fantaro ny mailaka sandoka, hosoka ary tsy tena izy
mipoitra avy amin'ny firaisana eo amin'ny foto-kevitry ny "feo" mi "Fisolokiana ny maha-izy azy" ary fisolokiana io izay mikendry ny hampifangaro ny fahalalana ny angon-drakitry ny mpampiasa manokana sy ny fampiasana antso an-tarobia mba hamitahana azy ireo.
Nisy fampandrenesana tonga tamin'ny finday na tao amin'ny boaty mailakan'ireo niharam-boina, toa avy amin'ny andrim-panjakana niavian'izy ireo manokana, nitatitra ny raharaham-barotra mampiahiahy mifandraika amin'ny kaontin'izy ireo: ilay mpampiasa voan'ny tsindry fampitandremana amin'ny adiresy Internet an'ny tranonkala voatondrona sy ny Ity antso ity dia mahazo antso an-tariby, nateraky ny nomerao tsy misy tol, izay mody ataon'ireo mpisoloky ho mpiasan'ny banky te-hampijanona ny halatra, raha vao mahazo ny kaody fidirana dia manome alalana ny famindrana na fandoavam-bola ao ambadiky ny lamosin'ireo niharam-boina izy ireo.
12. Fisolokiana bonus amin'ny fivezivezena:
la Minisiteran'ny tontolo iainana nanameloka ny tatitra vao tonga maromaro, avy amin'ireo izay mikasa ny hanararaotra ilay bonus mobility momba ny fisian'ny rindranasa samihafa izay mikasa ny hamitaka ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny anarana manintona toy ny "Voucher mobility 2020". Ny departemanta dia mampita ny fomba fampitana ireo fombafomba hangataka bonus amin'ny alalàn'ny fantsona ofisialy andro maromaro alohan'ny daty fandefasana ireo fangatahana. Ny fangatahana famitahana dia efa notaterina haingana amin'ny tompon'andraikitra mahefa.
Ransomware dia karazana scam iray izay anaovan'ny mpijirika ny malware amin'ny solosaina na rafitry ny solosaina izay mametra ny fahazoan'ny olona iharan-doza amin'ny fisie amin'ny alàlan'ny fitakiana fandoavam-bola, matetika amin'ny endrika bitcoin, hanafoanana azy. Ny fandrika ransomware sandoka dia mety hanimba be ihany koa: ny fisolokiana amin'ny ransomware amin'ny tranga ratsy indrindra dia manimba ny fahatsapana filaminana sy fiainana manokana an'ny olona iharan'izany ary ao anaty fiovana mahatsiravina, ny hackers dia nilaza tamin'ny alàlan'ny mailaka fa nanenjika fakan-tsary tranonkala raha nijery sarimihetsika ilay niharam-boina. pôrnôgrafia
Ny dokambarotra fanenjehana cam, tohanan'ny famerimberenan'ny tenimiafin'ny mpampiasa ao anaty mailaka, dia fomba iray hanakanana ny mailaka: na alefanao aminay ny bitcoins na alefanay any amin'ireo mpampifandray anao rehetra ilay horonan-tsary. Raha ny tena izy dia fanodikodinam-bola madio ity - tsy manana rakitra an-tsary ireo mpisoloky ary tsy nijirika tamin'ny mombamomba anao akory, satria ny tenimiafina izay nolazain'izy ireo fa nangonina avy amin'ny tahiry momba ny teny miafina ampahibemaso sy mailaka naely.
Ahoana no hiarovan-tena
Ho fanampin'ny fiambenana hatrany, ny manam-pahaizana dia manome sosokevitra ireto manaraka ireto:
alohan'ny hidiranao amin'ny antsipiriany momba ny carte de crédit anao amin'ny tranokala dia mila manamarina izany ianao fiarovana;
Mayo mandefasa kaody fidirana manokana any amin'ny kaonty fanamarinana - ny banky, raha ny marina, ohatra, aza mangataka fahazoan-dàlana hiditra amin'ny banky an-trano amin'ny alàlan'ny mailaka na telefaona;
manana fampitandremana rehefa angatahina ny fandefasana kopian'ny antontan-taratasy;
Aza misintona Mayo fametahana azo amin'ny alàlan'ny mailaka na hafatra an-tsoratra raha tsy azonao antokamaha- avy amin'ny mpandefa;
ho an'ny karazana fisalasalana na olana mifandray hatrany ny manam-pahefana mahefa.
Ampiarahinay amin'izany koa ny fahafaha-mampiasa programa Anti-Ransomware manohitra ny virus Ransom na Crypto
VAKIO IZAO: Tranonkala mamitaka amin'ny fisolokiana amin'ny Internet
Ahoana ny fanesorana ny firaketana feo avy amin'ny Alexa sy Google Assistant
Ahoana ny fomba fampivelarana ny webcam rehefa mamadika ny PC mandeha ho azy